Nuxurka Kulan Dhexmaray Raysal wasaare Saacid iyo R/waasrihi hore ee Norway | Salaan Media
Nuxurka Kulan Dhexmaray Raysal wasaare Saacid iyo R/waasrihi hore ee Norway
Raysul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay raysul wasaarihii hore ee Norway, Kjell Magne Bondevik oo hadda ah guddoomiyaha Xarunta dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha ee Oslo.
Mudane Shirdoon ayaa kulankii uu la qaatay Kjell uga warbixiyey xaaladaha dalku marayo, iyo horumarrada ay dowladdu ka sameysay dhanka xuquuqul insaanka, dowlad wanaagga iyo nabad ku soo dabaalidda dalka, isagoo dhinaca kalena sheegay in dalalka Soomaaliya iyo Norway uu ka dhexeeyo xiriir taariikhi ah.
Raysul wasaaraha ayaa dowladda iyo shacabka Norway uga mahad celiyey taageerooyinka kala duwan ee ay siiyaan dadka Soomaalida ah ee ku nool dalkooda iyo taageerada ay had iyo jeer la garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee dhinacyada dib u dhiska iyo xiriir wanaagga.
Raysul wasaarihii hore ee Norwey ayaa sheegay in Soomaaliya uu yimid dhowr jeer oo hore, maantana ay ka muuqdaan Muqdisho isbadallo dhinac kasta ah oo ay sameysay dowladda Soomaaliya, wuxuuna intaas ku daray in uu hadda u jeestay horumarinta dimoqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha.
Kjell Mgne Bondevik ayaa waxaa kaloo uu sheegay in xafiiskiisu uu Soomaaliya u qoondeeyey qorshe lagu horumarinayo baarlamaanka Soomaaliya, iyo kala shaqaynta dowladda ee baahinta maamul wanaagga, federaalisamka, iyo horumarinta xuquuqul insaanka.